I-China Carton yeekona ezimbini zekona eshicilelweyo yokutywina umatshini wokuphawula I-S-conning
ICarton ezimbini zembombo yokufaka uphawu lokushicilela umatshini
ISICELO:Iibhokisi zesikwere ezahlukileyo, iilebheli ezingatshatanga neziphindwe kabini kwiikona kunye nokutywinwa
ISICELO: Iibhokisi zesikwere ezahlukileyo, iilebheli ezingatshatanga neziphindwe kabini kwiikona kunye nokutywinwa
•Bamba ukuhambisa ngesantya esingqameneyo ukugcina uzinzo lweebhokisi xa ulebhelisha. Iqinisekisa ukungqinelana kwelebheli yeebhokisi ezinobunzima bokukhanya.
•Ukubonelela ngeebhokisi zokwahlula, uxinzelelo oluphezulu kunye nokulungiswa, iilebheli, ileyibheli yokubamba yekona kunye nokurekhodwa kwelebheli yokurekhoda kunye neleyibhile yokwala kunye neminye imisebenzi, ukuqinisekisa ukutywina kunye neelebheli ezingaguqukiyo, ukuze abasebenzisi baqinisekiswe ukuba banxibelelana nomatshini webhokisi, ukuze baqonde isantya esiphezulu ukusebenza;
•Inketho yokukhusela ebonakalayo ekhuselekileyo, kunye nokhuseleko lokukhusela, ukuqinisekisa ukhuseleko lomqhubi.
Inkqubo yokumakisha i-servo ephezulu.
-Isebenziseka kwiindidi ezahlukeneyo zokulebhelisha ibhokisi, kunye necala elinye okanye ukutywinwa kwe-diagonal kunye nokusonga kwekona.
Isantya esizinzileyo: 0-200 iiPC / ngomzuzu.
Inkqubo yokuphawula ngokuchaneka okuphezulu, eneelebheli zokunyamezelana ± 1mm.
Inkqubo yolawulo okrelekrele yokuqinisekisa ukuba akukho mibimbi xa kufakwa iilebheli kwaye akukho bubble zomoya zeelebheli ezibonakalayo.
Indlela yokulungiswa kwetyathanga yokuhambelana ukuze kuqinisekiswe ukuhanjiswa okuzinzileyo kwebhokisi kunye nendawo echanekileyo.
-Umatshini opheleleyo usebenzisa i-SUS304 insimbi engenasici kunye ne-A6061
i-alloyum ene-alloyum ephezulu, ngenkangeleko elungileyo kunye nokuthotyelwa kweemfuno zemigaqo ye-cGMP, i-FDA, i-OSHA, i-CSA, i-SGS kunye ne-CE.
Umatshini wokuPhawula ngebhokisi uyilo oluvakalayo noluguquguqukayo olulungele iimveliso zokulebhelisha ezahlukeneyo.
Ngaba ukubhabha kwenqwelomoya kwinto eyahlukeneyo, ukwandisa banzi uluhlu lwesicelo.
Ngokongeza abafaki zelebheli eyongezelelweyo banokuyibona ileyibheli yokunamathela kabini kwaye baphindaphinde ukulebhelisha, Sinokongeza iindawo ezahlukeneyo zokufumana umsebenzi we-Intanethi kunye nokwala ngokweemfuno zakho.
Ibhanti yokubamba eguqukayo .uqinisekise ukubeka iileyibhile ngokuchanekileyo ngakumbi.
• Ubude beelebheli ezi-Smart busetelwe ukufezekisa ngokukhawuleza isikhundla esigqibeleleyo seeleyibhile.
• Ukulahleka kwelebheli okushiyekileyo kuthintela imveliso enelebheli yokuqinisekisa ukuchaneka kwemveliso ngelixa uvelisa kwaye uzalisekisa inkqubo yeQC yokuvelisa.
• Ikhawuntari eyakhelweyo inokuqhuba ngokukhululekileyo ukugcina umkhondo wenani leemveliso ezinelebheli yokulawula imveliso.
• Umsebenzi osetiweyo wokuveliswa kwelebheli kuyema ngokuzenzekelayo xa amanani eemveliso ezinqwenelekayo abhalwe ukulawulwa kwemveliso ngokufanelekileyo.
Ubukhulu (L) 2400 x (W) 1550x (H) 1660mm
Ubungakanani besikhongozeli (H) 20-100mm (W) 30-210mm (L) 100-200mm
Isantya P200pc / m
Egqithileyo Icala eliphindwe kabini leFlat yokujikeleza iBhotile yokuMakisha
Okulandelayo: ulwelo ibhotile ukupakisha umatshini
S-Conning Isantya esiphezulu Isirinji ezilahlwayo Hlanganisa ...
Indibano yesirinji kunye neNkqubo yokuPhawula, Umshicileli weLayibhile yeeBhotile zeJar, Phezulu kunye nasezantsi kwelebheli, Umatshini wokuTywina wePlastiki, Umatshini wokuPhawula iBhotile yoRhwebo, Umatshini wokufaka iilebheli kwiibhokisi,